IZiko labandwendweli iApple Park sele linomhla wokuvula esidlangalaleni | Ndisuka mac
Ngaba ufuna ukutyelela i-hub entsha ye-Apple eCalifornia? Ewe, ngokuchanekileyo, iApple Park. Ewe, ubona ukuthenga amatikiti enqwelomoya, kuba ngokwinto eyaziwa, abo bavela eCupertino baya kuvula iingcango ze "Apple Park Visitor Centre" yabo kungekudala. Ngamanye amagama, kwakule nyanga kaNovemba iya kuba ilungele ukuba uluntu ngokubanzi lujonge.
Ekupheleni kuka-Okthobha ophelileyo kwakusele kuvakala ukuba iZiko labandwendweli i-Apple Park liza kuvula iingcango zalo phambi kokuphela kwalo nyaka ka-2017. Kwaye kuya kuba njalo, njengoko bafundile Macrumors. un Umsebenzisi we-Twitter uthumele ifoto apho ungabona khona isibhengezo apho, ngaphandle kokuchaza ixesha elithile, eli sebe lekhampasi entsha yeApple izakuvula iingcango kuluntu ngoNovemba 17.
Kwangokunjalo, iApple ngeyathumela izimemo kubamelwane bayo, apho ibamema kusuku olungaphambi kolu kuvulwa ngokubanzi-nge-16 kaNovemba-ukutyelela iZiko labandwendweli i-Apple Park. Oku kufuna ukuba abancedisi baphatha izazisi zabo apho banokuqinisekisa ukusondela kwalowo bahlala kwikhampasi yomncedisi. Ngelixa kucacisiwe ukuba isimemo sesomntu kwaye asinakuguqulwa, ukuya kuthi ga kumalungu ama-3 anokuzimasa- sithatha kwiyunithi yosapho.
Kwelinye icala, eli Ziko leNdwendwe leApple Park liya kuba yindawo apho uluntu ngokubanzi luya kuba nevenkile yeApple apho banokuthenga khona kurhwebo yebrand okanye ube nekofu ethuleyo kwindawo evulekileyo. Ngapha koko, inkampani ngokwayo ichaze esi sithuba njenge indawo enemigangatho emibini, enendawo yokudlela enkulu kunye nevenkile. Ukongeza, iindwendwe ziya kuba nendawo yokupakaindawo engaphantsi komhlaba eneendawo ezingaphezu kwama-600 kwaye, kwiphiko elisemazantsi eli ziko, indawo enezihlalo zangaphandle. Ngelixa eluphahleni, baya kuba nokujonga okubekwe kwi-7 yeemitha ngaphezulu kwenqanaba lomhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IZiko labandwendweli iApple Park sele linomhla wokuvula esidlangalaleni